Macquarie Links, New South Wales, i-Australia
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Jas
Sicela ulandele imihlahlandlela yendawo kanye nezeluleko zikahulumeni we-NSW mayelana nemikhawulo yokuhamba kanye ne-lockdown ngesikhathi sokuqubuka kwe-COVID-19.
AKUKHO IMICIMBI YASEZINDINI NOMA IMIBUTHANO ENOMSINDO - lena indawo enokuthula ethule. Noma imuphi umsindo oweqile uzoholela ekutheni abezokuphepha/amaphoyisa akuphelezele uphuma emagcekeni
Zonke izinsiza - amachibi okubhukuda omphakathi, izinkundla zethenisi, i-BBQ, isikhungo somphakathi - zingaphansi kwezinyathelo ze-covid, ukutholakala futhi zidinga ukubhukhwa (yimi njengomsingathi) ngemvume edingekayo evela ekomitini lezindlu.
I-Macquarie Links itholakala kalula ukuze wenze ukuhambahamba ngesikhathi sokuhlala kwakho kujabulise
Isitimela se-Ingleburn kanye nesiteshi samabhasi - 4mins drive
- Ungathola izitimela eziya e-Sydney CBD (35mins) kanye ne-International/Domestic Airport (30mins) njalo ngemizuzu eyi-15
Kunebhasi *yamahhala* ye-Macquarie Links elihamba liya futhi libuya esiteshini sase-Ingleburn ngamahora aphakeme kakhulu - phakathi kuka-545am kuya ku-9am ekuseni nango-3pm kuya ku-7pm kusihlwa.
Ezinye izindawo zokuhlala e- The Pinnacle:
I-Costco Crossroads - 10min ukushayela
I-Ingleburn Shopping Village (Coles/Woolworths njll) - 5mins drive
I-KFC, i-Subway, i-Dominos, i-Pizza Hut nezinye izindawo zokudlela eziningi / izindawo zokudlela - 5mins drive
I-M5 Motorway - 5mins
I-M7 Motorway - 9mins
Izikhumulo zezindiza zaseSydney International and Domestic - 30mins
I-Sydney CBD - 40mins
4.56(81 okushiwo abanye)
4.56 out of 5 stars from 81 reviews
4.56 · 81 okushiwo abanye
I-Macquarie Links Estate
Ifa lakhiwe eminyakeni eyi-16 edlule futhi liseduze nomuzi womlando - iMacquarie Fields House. Ifa linezigaba eziyi-14 zezindlu, izigaba ezi-3 zezindlu zangasese, i-1 yezindlu zokuhlala, Isikhungo Somphakathi, i-Sports Complex, i-bushland park kanye nenkundla yegalofu yomqhudelwano. Ukuthuthukiswa kwefa kwaqedwa ngo-2017 ngokunikezwa kweSigaba 16, i-Pinnacle Villas, kanye ne-AGM yayo yokuqala.
Umphakathi unenkundla yezemidlalo, (Izinsiza), ehlinzeka ngokufinyelela kumachibi okubhukuda omphakathi amabili, izinkundla zethenisi kanye nama-BBQ futhi iyindawo engenabo utshwala. Ukufinyelela kungesango elikhiyiwe elinephedi yokuthinta - "Ikhodi Yephuli" iyadingeka ukuze ufinyelele futhi ingatholwa ngokuthintana nami (umsingathi). Izinkantolo zethenisi kanye nokufinyelela ku-pool kungaphansi kokutholakala futhi ikomidi lezindlu kufanele ligunyaze zonke izicelo zokubhukha, ngakho-ke ngeke kuhlale kuqinisekisiwe.
Kukhona nezinsiza zokulungisa umhlaba, isevisi yamabhasi ezindlu (Isixhumanisi), izinsiza zokuphepha kanye neklabhu yegalofu engasetshenziswa abahlali. Isango lezindlu ligadwa ngo-24×7 ukuze lisize ekuvikelekeni kwendawo, ngohambo oluhambayo ebusuku.
Le ndawo ikhule ngokushesha eminyakeni edlule futhi inkundla yegalofu iheha abahlali abathanda igalofu abazimisele kanye nalabo abajabulela ezinye izinto zokungcebeleka. Kunemizila emikhulu enqamula endaweni yokulondoloza imvelo enokubukwa okumangalisayo okuya edolobheni laseSydney phezulu kweGovernors Way.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-8099
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R6471.
Hlola ezinye izinketho ezise- Macquarie Links namaphethelo